Shuruudaha adeegsiga mobile - BBC Somali
Shuruudaha adeegsiga mobile
7 Nofembar 2011
Galidda iyo adeegsiga "bbc.co.uk' gudaha UK iyo dibaddaba waxaa kuu soo gudbiya BBC. (isticmaalayaasha dibedda ee boggan waxaa dhici karta in ay arkaan xayaysiin boggag gaar ah, oo ay soo gudbiso qaybta BBC ee u xilsaaran dhinaca ganacsiga, BBC Worldwide Limited ("BBCW") sida ku xusan shuruudaha soo socda. 1.Hadii aad isticmaalayso bb.co.uk waxaad aqbalaysaa in aad raacayso shuruudahan, oo dhaqangalkoodu bilaabanayo isla marka ugu horaysa ee aad adeegsato bbc.co.uk. Hadii aadan ogolayn in aad raacdo dhamaan shuruudaha soo socda fadlan ha galin, ha adeegsan iyo/ama wax ha ku darsan bbc.co.uk.
2. Waxaa dhici karta in BBC-du ay mar mar wax ka badasho shuruudahan, sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in badanaa aad hubiso shuruudaha. Hadii aad sii waddo adeegsiga bbc.co.uk waxaa loo qaadan doonaa in aad ogoshahay shuruudaha waxa lagu daray ama laga badalay. Hadii aadan ogolayn isbadalada, waa in aad joojisaa isticmaalka boggan internetka. Hadii uu jiro is khilaaf u dhaxeeya shuruudahan iyo kuwo gaar ah oo ka jira halka aad joogto oo ka soo muuqda qaybaha kale ee bbc.co.uk (oo ay ku jiraan sharciyada guri) markaasi kan dambeeya ayaa lagu dhaqmayaa. Shuruudaha oo sii socda: Adeegsiga bbc.co.uk Xuquuqda hal abuurka Xog ku biirinta BBC Bulshada bbc.co.uk Iska fogaynta iyo xadidaadda mas'uuliyadda Guud ahaan Barnaamijyada Widgets-ka Adeegsiga bbc.co.uk
3. Waxaad aqbashay isticmaalka bbc.co.uk sababo la xiriira dhinaca sharciga iyo hab aan ku xadgudbin xuquuqda, xanibin ama faragalin isticmaalka iyo ka faa'iidaysiga bbc.co.uk. Dhaqamada mamnuuca ah, waxaa ka mid ah: handadaadda ama in aad cid ka caraysiiso ama qof howshiisa ka qasto, aad gudbiso anshaxdarro ama xadgudub ama aad carqaladayso socodka dood caadi ah oo ka jirta bbc.co.uk. Xuquuqda hal abuurka
4.Dhamaan xuquuqda hal abuurka, astaanta ganacsi, xuquuqda qaabaynta, shatiyada iyo xuquuqda lahaanshaha aqoonta (mid la diiwaangaliyay iyo mid aan la diiwaangalinba) oo ku jirta ama ku qoran bbc.co.uk iyo wax walba (oo ay ka mid yihiin barnaamijyada) bogga ku jira, waxaa iska leh BBC ama cidda fasaxa siisay. (Waxaa ku jira isticmaalayaasha kale). Laguuma ogola in aad min-guuriso, dib u soo saarto, dib u daabacdo, kala hufto, kala furfurto, qaabka ka badasho, dajisato, internet-ka galiso, idaacad ka sii dayso, dadwaynaha u gudbiso ama hadii kale waa in isticmaalkaaga bbc.co.uk uusan noqon wax ka baxsan si shaqsi ah in aad u adeegsato, oo aan ganacsi la xiriirin. Waxaad kaloo aqbalaysaa in aadan ka samayn, badalin ama aadan wax ka qaadan xogta bbc.co.uk sidii ay doonto ha ahaateen marka laga reebo in aad si shaqsi ah u adeegsato, oo aan ka ganacsi ahayn. Si kasta ee kale oo aad doonayso in aad u adeegsato bb.co.uk waxay u baahan doontaa in aad ogolaansho qoran aad ka hesho BBC.
5. Magacyada, muuqaalada iyo astaamaha muujinaya BBC, BBCW ama qaybaha xiriirka la leh iyo waxa ay soo saaraan iyo laamahooda waan in aan lagu xadgudbin xuquuqdooda qoraalka, qaabaynta iyo astaamaha lagu yaqaan BBC, BBCW ama qaybaha sadexaad ee xiriirka la leh. Wax kasta oo ku qoran shuruudahan ma aha in loo fasirto in fasax(licence) loo haysto ama xaq loo leeyahay adeegsiga astaamaha, xuquuqda qaabaynta ama min-guurinta BBC, BBCW ama qayb kasta ee kale. Wax ku biirinta BBC
6. Hadii aad la wadaagto BBC (qoraal, sawirro, muuqaallo kale, video ama dhagaysi), waxaad ogolaatay oo aad BBC u fasaxday, si lacag la'aan ah, in ay u isticmaasho si walba oo ay doonto ( oo ay ku jirto in ay qaabayso sababo la xiriira in la waafajiyo hababka shaqada iyo tifaftirka) ee barnaamijyada BBC ee warbaahinta dunida oo dhan. (waxaa ku jira kuwa caalamiga ah ee gala barta BBC.) Mararka qaar waxaa dhici karta in BBC ay la wadaagto qayb sadexaad oo ay aaminsan tahay.
7. Xuquuqda hal abuurka mar walba adigaa iska leh, ogolaanshahana ma aha mid gaar ah, sidaa darteed waad sii wadi kartaa in aad u adeegsato hantidaada si kasta ee kale oo aad doonayso, oo ay ku jirto in aad u ogolaato dad kale in ay isticmaali karaan.
8. Si ay u dhacdo in BBC ay isticmaasho waxaaga, waa in aad cadaysaa in waxa aad soo gudbinayso aad adiga asalkooda leedahay, aysan ahayn wax cid ceeb u soo jiidaya, isla markaana aysan jabinayn sharciyada UK, oo aad xaq u leedahay in BBC aad u ogolaato in ay u adeegsato siyaabaha kor ku xuran, in aad haysato ogolaanshaha ciddii kale ee lagu magacaabo ama laga aqoonsan karo sheekadaada, ama in aad ogolaansho ka haysatowaalidka ama qofka mas'uulka kaa ah hadii aad ka yar 16 sano.
9. Badanaa magacaaga ayaan raacinaynaa waxa aad soo dirto, in aad dalbato si kale maahee, balse sababo howleed darteed badanaa taasi suurtagal ma aha. BBC waxaa dhici karta in ay u baahato in ay kula soo xiriirto sababo dhinaca maamulka ah, ama la xiriira hubinta ujeeddooyinka fariimahaaga ama la xiriira mashruucyo gaar ah. Faahfaahin buuxda oo ku aadan goorta iyo sida ay dhici karto in aan kuula soo xiriirno fadlan eeg Siyaasadda BBC ee Xuquuqda gaarka ah ee shaqsiga iyo shuruucda goobta aad joogto meelaha qaar.
10. Fadlan qatar ha galin naftaada iyo kuwa kaleba, ha qaadin tallaabo keenaysa qatar laga baaqsan karo ama jabinaysa sharciga marka aad abuurayso qodob aad is leedahay u gudbi BBC.
11. Hadii aadan doonayn in aad BBC siiso ogolaashaha kor ku xusan ee shuruudahan, fadlan waxba ha u soo gudbin ama ha la wadaagin bbc.co.uk. *qodobada la xiriira wararka fadlan ogow in ay dhici karto in loo gudbiyo qaybaha BBC-da xiriirka la leh ee dibedaha, kuwani dhamaan waa warbaahin wararka dibedda oo sumcad leh oo ay ka mamnuuc tahay in ay wax ka badalaan qodob sidii ay doonto ha ahaatee, oo ay Idaacadadha kale ee UK ama warbaahinta wax daabacda u soo gudbin karaan.
12. Hadii aad wax su'aalo ka qabto wixii aad u soo dirayso BBC, fadlan eeg FAQs (Su'aalaha inta badan la soo waydiiyo, oo laga jawaabayo.) Bulshooyinka bbc.co.uk
13. Si aad uga qaybgasho ama wax ugu darsato bulshooyinka qaar ka qaybgalaya bbc.co.uk, waa dhici karta in lagaaga baahdo in aad iska diiwaangaliso ama iska qorto bbc.co.uk. Faahfaahinta shaqsi ee aad siiso bbc.co.uk oo ka mid ah qorshaha is diiwaangalinta iyo/ama xiriirka kala ee falgalka kale ee aad la samayso bbc.co.uk waa la uruurin doonaa, la kadinayaa, loona adeegsan doonaa si waafaqsan Siyaasadda BBC ee ilaalinta Xogta gaarka.
14. Waxaad aqbalaysaa in aad isticmaasho bulshooyinka bbc.co.uk (oo ay ka mid yihiin kooxaha fariimaha) si waafaqsan shuruucda bulshada ee soo socda. Arrintan, waxay quseeysaa dhamaan bbc.o.uk baraha bulshooyinka iyo adeegyada. Waa in aad, siday tahayba, aqrisaa shuruudaha qaybtaas u gaarka ah ama adeegyada aad isticmaalayso, maadaama ay dhici karto in ay waxyaabo ku kala duwan yihiin shaciyada bulshadu:
Waxyaabaha aad soo gudbinayso Furahaaga BBC Badbaadada Baahida dhinaca sharciga ah Hadii aad ka yar tahay 16 sano Hadii aad jabiso sharciyada bulshada
Waxyaabaha aad soo galinayso Waxa aad soo gudbinayso waa in ay noqdaan wax macno leh oo caadi ah. Lama ogola dhaqan carqaladayn, xadgudub iyo aflagaaddo: Waxyaabaha oo soo gudbinayso waa in ay ahaadaan kuwo waxtar leh oo si edeb leh loo qaabeeyay, lama doonayo wax xumaan loola jeedo ama ujeedku yahay in dhibaato lagu abuuro. Lama ogola arrimo sharci darro ah ama aan wanaagsanayn: Sharci darro, handadaad, ceebayn, aflagaadayn, hanjabaad, dhibaatayn, ceeb, xaqiraad, wixii galmo la xiriira (Sexually oriented), xadgudub dhinaca isirka, ama hadii kale wixii xun oo dhan lama ogola. Dulqaad yeelo: Waxaa dhici karta in shaqsiyaad kala duwan oo da' walba iyo awood kasta leh ay ka qaybgalayaan bulshada la xiriirta bbc.co.uk. Lama ogola qashin iyo wax ka baxsan mowduuca: Ma ogolaanayno soo gudbinta waxyaabo isku mid ah marar badan. Fadlan marar badan ha soo gudbin wixii aad nala wadaagayso hana u dirin wixii ka badan hal dood, ama ha soo dirin wax aan la socon mowduuca goobaha mowduucyada gaarka ah looga doodayo. lamana ogola xayaysiin iyo cid amaanid. Lama ogola qaribayaal: ???? Qodobada ku qoran wixii aan luqaddan ahay waxaa dhici karta in la tirtiro dhib ma lahase hadii sharciyada u degsan qaybta aad ku jirto ay ogol yihiin. Lama ogola iska dhigid qof kale Lama ogola magacyo aan haboonayn (sida: afxumo, daandaansi iwm) URLs (cinwaanada boggagga) oo kaliya waxaa la gudbin karaa goobta aad ku jirto hadii laga ogol yahay. Lama ogola qalad u isticmaalka adeegga cabashooyinka. Hadii aad ku adkaysato in aad sii waddo, tallaabo ayaa dhici karta in lagaa qaado oo lagaa xiro. Furahaaga BBC Hadii aad isticmaasho magacyo kala duwan oo ujeedkaagu yahay in aad koox arbushto ama ka caraysiiso isticmaalayaasha kale, waxaa dhici karta in tallaabo laga qaado dhamaan magacyada aad adeegsato. Dhamaan magacyada lagu furto boggaga waa in la diiwaangaliyaa oo lagu qoraa emailada shaqsi ee saxa ah, ee mar kasta qofku gali karo si emailo loogu diri karo. Magacyada la diiwaangaliyo iyadoo qof kale emailkiisa la isticmaalayo waa la xiri doonaa ogaysiin la'aan. waxaa dhici karta in looga baaho isticmaalayaasha in ay dib u xaqiijiyaan magacyada hadii ay nala noqoto in ay emailo aan rasmi ahayn ay ku furteen. BBC waxay xaq u leedahay in ay xirto magacyada lagu galo bogga hadii isticmaalaha la arko in uu adeegsanayo cinwaanno sii marid ah ee internet Protocl (Proxy IPs), Iyadoo la isku dayayo in la qariyo isticmaalka magacyo badan oo bogaga BBC lagu soo galo, ama hadii qof aan UK joogin uu iska dhigo uu joogo UK, ama uu si uun u arbusho howlaheena. (iii) Badbaadada Waxaan ku talinaynaa in aadan sheegin aqoonsigaaga shaqsi ama cid kale aqoonsigeeda (tusaale ahaan: number-ka telefoonka, cinwaanka boostada, cinwaanka guriga ama cinwaanada emailada ama faahfaahin kasta ee kale ee keenaysa in qofka si shaqsi ah loo aqoonsado) dhamaan bogga BBC. (iv) Sharciyada lagaaga baahan yahay Waa in aadan gudbin ama aadan dirin wixii meel ka dhac ah ama sharci daro ah noocii ay doonaan ha ahaadeene inta aad ku jirto bbc.co.uk Waa mamnuuc in aad wax ku biiriso bulshada bbc.co.uk, adigoo ujeedkaagu yahay in aad fal sharci daro ah ku kacdo ama aad dhiirigaliso. Waxaad ogolaatay in aad gudbiso ama la wadaagto bbc.co.uk howl aad adigu leedahay asalkeeda. Waa in aadan gudbin, ama aadan soo min guurin qof kale howshiisa, ama aadan ku xadgudbin xuquuqda BBC ama cid sadexaad oo ay ku jiraan shuruucda xuquuqda hal-abuurka, astaamaha, sirta ganacsi, xogta gaarka ah, is-shaacinta iyo xuquuqda shaqsi ama xuquuqda lahaansho. (v) Hadii aad ka yar tahay 16 sano: Fadlan waa in aad ogolaansho ka heshaa waalidka ama cidda mas'uulka kaa ah ka hor inta aadan ka qaybgalin mid ka mid ah bogaga bbc.co.uk Marna ha sheegin aqoonsigaaga shaqsi ama cid kale aqoonsigeeda. (Tusaale ahaan, iskuulka, number-ka telefoonka, magacaaga oo buuxa, cinwaanka gurigaaga ama cinwaanka emailka). (vi) Hadii aad jabiso shuruucda (bulshada) boggagga: Hadii aad ku guuldaraysato in aad raacdo shuruucda (boggagga) bulshada (iyo/ama kala duwanaanshaha sharciyada guriga ee goobta aad ku jirto) marka aad ka qayb qaadanayso boggagga bbc.co.uk, waxaa laguu soo dirayaa email kugu wargalinaya sababta loo diiday wixii aad gudbisay ama loo tifaftiray. Emailkan waxaa kaloo raacaya digniin ah hadii aad sii waddo jabinta sharciyada in ay dhici karto in ay keento tallaabo in laga qaado magaca ama magacyada aad isticmaasho. Tallaabadan, waxaa ka mid noqon kara wax kasta oo aad gudbinayso in la hubiyo ka hor inta aan loo ogolaan in bogga lagu daabaco ama in si ku meelgaar ah ama joogto ah loo joojinayo awoodda aad u yeelan karto in aad ka qaybgasho qaar ama dhamaan boggagga ee bulshooyinka bbc.co.uk Hadii aad gudbiso ama aad la wadaagto qodob aan haboonayn ama daandaansi ah mid ka mid ah boggagga bulshooyinka bbc.co.uk ama meel kale oo isla bbc.co.uk ama hadii kale aad gasho howl qalalaase ah oo laga sameeyo bbc.co.uk, BC waxay u arkaysaa tallaabadaas mid qatar ah iyo/ama lagu celiyo, BBC waxaa dhici karta in ay adeegsato wixii war ah ee ay heli karto ee kugu saabsan si ay u joojiso in aadan u gaysan xadgudubyo kale. waxaa tallaabadan ku jiri karta in la wargaliyo qaybta sadexaad sida shirkadda aad u shaqayso, school, email-kaaga cidda fasaxdau oo loo sheego xadgudubka aad ku kacday. BBC waxay xaq u leedahay in ay tirtirto wixii aad soo dirto, ama ay tallaabo ka qaaddo magaca aad ka samaysatay BBC, waqtigii ay doonto iyo sabab kasta ha ahaatee. Iska fogaynta iyo xadidaadda mas'uuliyadda
15. Inta badan mowduucyada la galiyo bbc.co.uk waxaa abuura qaybaha bulshada. Aragtiyada lagu muujiyo iyaga ayay u gaar tahay, hadii aanay si cad u sheegin shaqo kuma laha BBC iyo BBCW. BBC iyo BBCW midna mas'uul kama aha qodobada ay qaybaha bulshadu galiyaan bbc.co.uk iyo helitaanka ama waxa ku qoran boggagga qaybaha sadexaad ee laga sii gali karo bbc.co.uk. Meelaha boggaga internet oo kale looga sii gudbi karo bbc.co.uk ma aha in waxa ay qoreen BBC ama BBCW ay la qabaan. Isticmaalka boggaggaas wixii kaaga yimaadana BBC mas'uuliyadeeda ma laha.
16.xogta bbc.co.uk oo ay ku jiraan wararka, magacyada, muqaalada, sawirada, astaamaha iyo qodobada la xiriira BBC iyo/ama BBCW, wax soo saarkooda iyo adeegyadooda (ama wax soo saarka iyo adeegyada qaybaha sadexaad), waxaa loo soo gudbiyaa "sida ay tahay" ama "sida loo heli karo" Ilaa heerka uu sharcigu ogol yahay, BBC waxay meesha ka saaraysaa dhamaan matalaadda iyo fasaxyada (hadii sharci uu cadeeyay iyo hadii kaleba) oo ay ku jiraan fasaxyada la xiriira tayo lagu qanci karo, ku haboonaanta ujeeddo gaar ah, ku xadgudbin la'an, waafaqid, dhinaca amniga iyo saxsanaanta. BBC ma ballanqaadayso, taxanaha taariikheed, dhamaystirnaanta iyo waxqabadka bogga ama waxa ku qoran. Iyadoo aan isku dayayno in la xaqiijiyo in dhamaan waxa ku qoran BBC ay noqdaan kuwo sax ah waqtiga la daabacay, ma qaadayno mas'uuliyadda wixii qaladaad ah, ama laga saaray, amaba wax qaldan oo ku jira bogga.
17. ma jiraan wax ku qoran shuruudaha oo xadaynaya ama meesha ka saaraya mas'uuliyadda BBC ee dhimashada ama dhaawac shaqsi ee ka dhacay dayacaad la xaqiijiyay. Iyadoo la raacayo jumladii hore, BBC iyo BBCW looma qabsan karo qasaaraha iyo dhibaatooyinka hoos ku qoran. (Hadii dhibaatada ama qasaaraha uu yahay mid la sii saadaalinayay, la sii arki karay, horay loo ogaa iyo hadii kaleba): (a) Xogta oo lunta; (b) qasaare daqli ama faa'iido la sii filayay oo la waayo. © lumid ganacsi; d) fursad lunta; (e) lumidda niyad wanaagga ama dhaawac sumcadeed; (f) qasaare soo gaara qaybaha sadexaad; ama (g) Dhibaato kasta ee aan toos ahayn, wixii fal gal ka dhasha, gaar ah ama tusaale noqon kara ee ka dhasha isticmaalka bbc.co.uk sidii ay doonto ha ahaatee.
18. BBC iyo BBCW ma ballanqaadayaan in howlaha bbc.co.uk aysan noqon doonin wax qalad ka madax banaan oo aan la carqaladayn karin, oo la sixi doono ciladaha ama bbc.co.uk ama server-ka soo gudbiya uu ka madaxbanaanaanayo virus-yo iyo ciladaha la xiriira. Waxaad qiraysaa in ay mas'uuliyadaada tahay in aad qaaddo tallaabooyinka kugu filan oo aad ku hubiso virus-ka (oo ay ku jiraan barnaamijyada ka hortagga virus-ka iyo hubinta kale ee badbadaada la xiriira) si aad u qanciso baahidaada gaarka ah ee saxsanaanta xogta aad dirayso iyo tan aad helayso. Guud ahaan
19. Hadii shuruudahan qaybo ka mid ah la go'aamiyo in ay yihiin sharci darro, oo aysan sharciga waafaqsanayn ama hadii kale sabab darteed loo dhaqangalin kari waayo la xiriirta dowlad ama wadan, iyadoo shuruduudaha loogu talogalay in ay noqdaan wax ku ool, markaas ilaa hadda iyadoo sharciga la eegayo shuruudaha ay sharci darada ku noqdeen, ku jabeen ama aan loo dhaqangalin karin, qaybahaasi waa laga sooci doonaa oo laga saari doonaa shuruudaha, inta soo hartayna waa sii jiriyaan, waana lagu dhaqamayaa.
20. Guuldarada iyo dib u dhaca BBC in ay fuliso xuquuqda ku qoran shuruudahan ma aha in ay meesha ka saarayso in BBC ay xaq u leedahay in ay dhaqangalinayso shuruudaha.
21. Shuruudaha waxaa xukumaya oo lala fasirayaa sharciga England iyo Wales, oo leh awood sharci oo ka saraysa wixii lagu murmo. British Broadcasting Corporation © 2002-2007 Broadcasting House, Portland Place, London, British Broadcasting Corporation © 2002-2007 Barnaamijyada Widgets In aad soo dajiso barnaamijka (software-ka) ee la adeegsan karo ("BBC Widget") oo aad dhigto shaashadda Compuyter-ka si aad ugu adeegsato xogta BBC ("BBC Content"), waxaad ogolaatay shuruudaha hoos ku qoran. Shuruudaha barnaamijyada Widget 3.Ogolaashaha iyo Mas'uuliyadda 3.1 Barnaamijka BBC Widget iyo xogta BBC in loo soo bandhigo "sida ay tahay" iyo "sida loo heli karo" ee loo soo dajiyay, degso oo isticmaal BBC Widget, kana gal xogta BBC, balse adigay kuu taal dhibkii kaaga yimaada. 3.2 BBC taxadar intii macquul ah way samaysay in ay xaqiijiso in barnaamijka BBC Widget iyo galidda xogta BBC aysan lahaanin wax qalad ah, virus ama cilado, hase yeeshee BBC ma ballanqaadayso in xaalku mar walba sidaa yahay. 3.3 Ilaa intii sharcigu ogol yahay, BBC ma ogolaanayso nooc kasta ha ahaadee, ee la xiriira BBC Widget, Xogta BBC ama Boggaga BBC, BBC mas'uul kama noqonayso wixii kaa lumo marka aad gasho barnaamijka BBC Widget ama xogta BBC. 3.4 Waxaa talo laguugu siinayaa in aad qaado dhamaan tallaabooyinka loo baahan yahay si aad uga difaacdo computer-kaaga in virus uu soo weeraro. 3.5 BBC waxaa dhici karta in ay badasho ama meeshaba ka saarto Xogta BBC si iskeed ah, ayna xayirto isticmaalka BBC Widget hadii la jabiyo shuruudahan isticmaalka. Guud ahaan Shuruudaha ku xiran isticmaalaha waxaa lala fasirayaa sharciyada England, waxaana ay hoos tagayaan shuruucda maxkamadaha England.